ဟာသ Archives - Channel Lover
“ဆီအပြည့် ထည့်မယ် ညီမလေး ” ဆိုပြီး အော်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဆီဆိုင်ကြီး တစ်ခုလုံးက ဆီထည့်နေတဲ့ ကားပိုင်ရှင်တွေရဲ့ အကြည့်တွေက ကိုယ့်ဆီကို စုပြုံရောက်လာခဲ့တယ် မျက်နှာကိုမော့ ရင်ကိုကော့ပြီး လက်ထဲက 1 Litre ရေသန့်ဗူးခွံလေးကို…. ဆီပန့်ကိုင်တဲ့ ကောင်မလေးလက်ထဲထည့် ပေးလိုက်တယ် “ထည့်ပြီးရင် အဖုံးသေချာပြန်ဖုံးပေးနော်လမ်းမှာ ဖိတ်ကျမှာစိုးလို့ “ဆိုပြီး မှာရသေးတယ် အဟင်းဟင်း အားလုံး ရယ်မော ပျော်ရွှင် နိုင်ကြပါစေ…။ unicode “ဆီအပွညျ့ ထညျ့မယျ ညီမလေး ” ဆိုပွီး အျောပွောလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ ဆီဆိုငျကွီး တဈခုလုံးက ဆီထညျ့နတေဲ့ ကားပိုငျရှငျတှရေဲ့ အကွညျ့တှကေ ကိုယျ့ဆီကို စုပွုံရောကျလာခဲ့တယျ မကျြနှာကိုမော့ ရငျကိုကော့ပွီး လကျထဲက 1 Litre ရသေနျ့ဗူးခှံလေးကို…. ဆီပနျ့ကိုငျတဲ့ ကောငျမလေးလကျထဲထညျ့ ပေးလိုကျတယျ … Read more
အစတုန်းက လုံးဝမသိခဲ့ဘူးဗျာ😢 တွေးကြည့်ရင် နောင်တအကြီးအကျယ်ရတယ်😕
အစတုန်းက လုံးဝမသိခဲ့ဘူးဗျာ😢 တွေးကြည့်ရင် နောင်တအကြီးအကျယ်ရတယ်😕 fb သုံးရကျိုး အလွန်နပ်မယ့် နည်းပါ အာလူးအခွံတွေကို ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့နည်းပါ ဖတ်သာကြည့်တော့ဗျာ👇👇👇 နည်းမသိသေးရင် အရမ်းနစ်နာပါတယ် အာလူးအခွံတွေကို ဒီအတိုင်း အလွယ်တကူ လွှင့်မပစ်လိုက်ပါနဲ့။ လုပ်နည်း ပြောပြပါ့မယ်… ရေအေးအေးထဲမှာ ဆားလေးနည်းနည်းခပ်ပြီး အားလူးအခွံတွေကို တစ်ညအိပ် စိမ်လိုက်ပါ။ နောက်နေ့မနက်ကျရင် အဲ့ဒီရေစိမ်ထားတဲ့ အာလူးအခွံတွေကိုရေထဲက ဆယ်လိုက်ပါ။ ရှာလကာရည် ထမင်းစားဇွန်းနဲ့ ၂ ဇွန်း၊ သကြားတစ်ဇွန်းထည့်ပီး မွှေပါ။ ပြီးရင် ဇကာဂုံးလေးထဲထည့်၊ ရေစစ်ပြီးနေပူပူမှာ ၆ နာရီကြာ လှန်းထားလိုက်ပါ။ ပီးတာနဲ့… လေလုံပလပ်စတစ် အိတ်အမဲထဲထည့်ပြီး ထိပ်က စုချည်ထားလိုက်ပါ။ အချိန်ကျလို့ ခေါင်းလောင်းတီးပြီး မောင်းလာတဲ့ ကားစိမ်းစိမ်းကြီးတွေ့ရင် ‘အောင်ပြီ’… လို့မှတ် အဲဟာ စည်ပင်သာယာက အမှိုက်သိမ်းကားပဲ အဲ့ကားပေါ်ကို … Read more
ငါး မရရင် ဘဲတစ်ကောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ငါးကန်ပိုင်ရှင်ရဲ့ အရမ်းကောင်းပြီး အသုံးဝင်ခဲ့တဲ့ လှည့်ကွက်အမှန်
ငါး မရရင် ဘဲတစ်ကောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ငါးကန်ပိုင်ရှင်ရဲ့ အရမ်းကောင်းပြီး အသုံးဝင်ခဲ့တဲ့ လှည့်ကွက်အမှန် ငါး မရရင် ဘဲတကောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ငါးကန်ပိုင်ရှင်ရဲ့ လှည့်ကွက်အမှန် -တစ်ခါကပေါ့.မြို့နဲ့မနီးမဝေးမှာ ငါးကန်လေးတစ်ခုဖွင့်ပါတယ် l”အခကြေးငွေ”ယူပြီး ငါးမျှားအပန်းဖြေတဲ့နေရာပေါ့။ ဖွင့်ပွဲနေ့မှာ အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ ငါးမျှားလို့ ငါးမရတဲ့သူတွေကို ဘဲတစ်ကောင်လက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ -အဲဒါနဲ့ ဖွင့်ပွဲနေ့မှာပဲ ပျော်ပျော်ပါးပါးလာရောက်ငါးမျှားကြပါတယ်ငါးမရလည်း ဘဲယူပြန်ပေါ့၊ ဒီလိုနဲ့ ငါးကန်ပိုင်ရှင်ရဲ့ ဘဲတွေလည်းအကုန်ပြောင်ပဲ..။ မျှားတဲ့သူတွေက ငါးရဖို့ထက် ဘဲတစ်ကောင်ရဖို့ကိုပိုစိတ်ဝင်စားကြလို့လား။-နောက်မှသိလိုက်ရတယ်…။ တစ်ကယ်တော့ ငါးကန်ပိုင်ရှင်သူဌေးဟာ အရင်က ဘဲမွေးမြူရေးလုပ်တာပါ အဲဒီနောက် ငါးမွေးမြူရေးကိုပြောင်းလုပ်ချင်ပေမယ့် ငါးမျိုးဝယ်ထည့်ဖို့က အရင်းအနှီုးမရှိ ဘဲတွေကလည်းရောင်းမထွက်တော့ ဒီနည်းကိုသုံးလိုက်တာ တစ်ချက်ခုတ်ပြီး သုံးချက်ပြတ်သွားပါတယ်.။ သူ့ ဘဲတွေလည်းကုန် ပိုက်ဆံလည်းရ ငါးမျှားတဲ့သူလည်းကျေနပ်ပေါ့ ဒီလိုနဲ့ ငါးမွေးမြူရေးကိုအောင်မြင်စွာစတင်နိုင်ခဲ့တယ်..။ -နောက်တစ်လလောက်ကြာတော့ နောက်ထပ်ပရိုမိုးရှင်းထပ်လုပ်ပါတယ် မည်သူမဆို အခမဲ့ငါးမျှားနိုင်ပါသည်…။ ငါးမိရင်တော့ တစ်ကီလိုကို … Read more
ဖောက်ပြန်နေ တဲ့ ချစ်သူကောင်လေး ပြန်ရောက်လာဖို့ ဘိုးတော်ဆီ သွားလိုက်တဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ အဖြစ် (ဖြစ်ရပ်မှန် )
February 16, 2022 by Channel Lover
February 6, 2022 by Channel Lover